ချစ်နိုင်(စိတ်ပညာ) Thursday, 04 July 2019
''ဤလောက၌ သီလသည် အထက် တန်းကျ၏။
အောင်မြင်မှုမှန်သမျှသည် သီလနှင့် ပညာကြောင့် ဖြစ်သည်''
လူနှင့်တိရစ္ဆာန် အဓိကဘာကွာခြားသ လဲဟု မေးမြန်းစူးစမ်းလေ့ရှိကြသည်။ ပညာ ရှင်များ အဖြေရှာသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်များ နှင့် ဒဿနပညာရှင်များက ခြားနားချက် သုံးမျိုးတွေ့ရှိရသည်ဟုဆိုပါသည်။
(၁) အသိÓဏ်နှင့် ကြောင်း ကျိုး ပညာ ကြီးခြင်း၊
(၃) အလှအပနှင့် အနုပညာကို ခံစား တတ်ခြင်း၊ ဖန်တီးတတ်ခြင်း
စာရေးခြင်းသည် လူလူချင်းဆက်သွယ် စကားပြောခြင်းတစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်။ စာ ရေးသူကပြောချင်သောစကား၊ ပြောစရာရှိ သောစကားကို အခြားလူတစ်ဦးတစ်ယောက် သို့မဟုတ် လူအများသို့ရေးသား၍ ပြောခြင်း မဟုတ်ပါလား။
ဘာကိုပြောသလဲဆိုတာထက် ဘယ်လို ပြောသလဲဆိုသောအချက်က ပို၍အရေး ကြီးပါသေးသည်ဟု အချို့ကဆိုမိန့်ခဲ့ပါ၏။ ထိရောက်မှုက အဓိကအရေးကြီးပုံကို မီး မောင်းထိုးပြပုံရပါ၏။
ဘာကိုပြောသလဲဆိုသည်မှာ What ? ၊
ရေးသူပြောသူ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် အကြောင်းအရာ ဘယ်လိုပြောသလဲဆိုသည် ကား How ? ၊ ဘယ်နည်း ဘယ်ပုံ၊ နည်း စနစ်၊ နည်းနာဗေဒ။
စကားပြောဟန်လား၊ စကားပြေလား၊ ပေးစာလား၊ ကဗျာလင်္ကာလား၊ ပြဇာတ်၊ ဝတ္ထုတို၊ ဝတ္ထုရှည်လား၊ ဆောင်းပါးလား၊ ပုံစံသဘော၊ အသွင်သဏ္ဌာန်သဘောလည်း ပါသည်။ နည်းဗျူဟာ။
ချိုချိုသာသာ သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ နားဝင် စဖွယ်လက်ခံချင်စရာကောင်းအောင်၊ ခံစား နားလည်အောင် ရေးသား ပြောဆိုခြင်း လား။
မာရေကျောရေ၊ ငေါက်ဆတ်ဆတ်နှင့် ကြားရသူ ဖတ်ရသူ နှာခေါင်းရှုံ့ပြီး နားခါး သွားရလောက်အောင် အပေါက်ဆိုးနှင့် ဆူညံအော်ဟစ်နေပုံမျိုးရေးထားသလား။
စေတနာကောင်းမှ စာကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ အနှစ်သာရပိုင်းပေပဲ။
''ဘယ်လိုပြောသလဲဆိုသည်က အနု ပညာ၊ အတတ်ပညာ၊ တတ်မြောက်ကျွမ်း ကျင်မှုပါမှ ထိရောက်မှုရှိနိုင်သည်။ တတ် မြောက်ကျွမ်းကျင်မှုဟူသည်ကား အလကား မရ။ လွယ်လွယ်မရ။ အားအထူးစိုက်မှသာ ရနိုင်သည်။ ကြိုးပမ်းမှသာရလာနိုင်ပါ သည်။ အခါခါအကြိမ်ကြိမ်လေ့ကျင့်ပြီး ကျင့်သားရမှသာ ကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်မှုရနိုင် ပေသည်။ လေ့ကျင့်၊ လေ့ကျင့်၊ လေ့ကျင့် မှုများခဲ့မှ ကောင်းသထက်ကောင်းမည်။
အဓိက လိုအပ်ချက်နှစ်ရပ်'' ရှိနေပါ သည်-
(၂) ပရိသတ်စာဖတ်သူအကြိုက် ကျရ မည်။ (အကြိုက်)
အကျိုးရှိအောင်ရေးတတ်ဖို့ အမြော် အမြင်ပညာ ပြည့်ဝရပေမည်။ Óဏ်ပညာ ပြည့်စုံဖို့ ဗဟုသုတဝမ်းစာ ရှိရပေမည်။ ဝမ်း စာအသိÓဏ်ပညာ ကျယ်ဝန်းအောင်ကား စာများများဖတ်ရမည်။ စာကောင်းပေ ကောင်း စုဆောင်းဖတ်ရှု၍ မိမိကိုယ်ကို အကျိုးရှိသောစာမျိုး၊ ရေးတတ်သူ၊ ရေးနိုင် သူဖြစ်ရန် ပျိုးထောင်ရပေမည်။
အနှစ်သာရ၊ အကြောင်းခြင်းရာ၊ ရည် ရွယ်ချက်ကောင်းစွာ ရွေးချယ်ရေးသားတတ် ဖို့ ဆည်းပူးရမည်။
ပရိသတ်အကြိုက်ကျမှ မိမိစာကိုဖတ် ကြပါလိမ့်မည်။ စာဖတ်သူနှစ်သက်လက်ခံ အောင် ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနိုင်ရမည်။ ရသ အနုပညာဖြင့် စာပေအတတ်ပညာဖြင့် ဖတ် ချင်စဖွယ်၊ စဖတ်မိလျှင် ဆက်ဖတ်ချင် အောင် မိမိကရေးသားတတ်ရမည်။ နည်း နာ၊ စာရေးခြင်းအတတ်ပညာကား ဖတ်ရုံ မှတ်ရုံမျှနှင့် တကယ်မတတ်၊ လက်တွေ့ ကိုယ်တိုင် ရေးသားလေ့ကျင့်မှုများမှ အမှား တွေ၊ ချို့ယွင်းချက်တွေ၊ ချို့တဲ့မှုတွေ၊ အား နည်းချက်တွေ ပြင်ရင်းပြင်ရင်း ကောင်း သထက်ကောင်းစွာ ပိုမိုတတ်မြောက်ကျွမ်း ကျင်လာရခြင်းဖြစ်သည်။
လေ့ကျင့်မှုကြိမ် ဖန်များစွာပြုမှ ပရိသတ်ကို ဖမ်းစားနိုင်စွမ်း သော(အနုပညာမှော်ပညာ)အတတ်ကို ရနိုင် သည်။ မလေ့ကျင့်ဘဲ မည်သူမှမတိုးတက် ပါ။ လေ့ကျင့်မှ ကျွမ်းကျင်နိုင်၏။
ဘာကို ရေးမှာလဲ၊ ဘာကို ပြောမှာလဲ ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အကြောင်းအရာ သည် မိမိက ရှာဖွေရသည်။ ဘာကိုရှာ သနည်း။ မိမိ၏ စရိုက်၊ မိမိ၏ဝါသနာ၊ ရင်းနှီးမှု၊ မိမိအကြိုက်၊ နှစ်သက်ရာဆီသို့ အာရုံကျစမြဲ။ မိမိက ယင်ကောင်လော။ ပျား ပေလော။
* ပျားကောင်တွေ သဘာဝ
ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းဖို့အတွက် လိုရင်း ကို တိုရှင်းစွာဖော်ပြရလျှင်ကား များများ မရှိပေ။
(၁) လောကကောင်းကျိုးကို ကြည့်ကြ၊ ကျင့်ကြ။
(၂) မိဘ၊ ဆွေမျိုး၊ လူမျိုး အကျိုးကိုဆောင် ကြ။
(၃) ထိုနှစ်ချက်ကိုသန်မာသော ပခုံးနှစ်ဖက် ဖြင့်ထမ်း၍ မြှင့်တင်နိုင်စွမ်းရှိသော မိမိ ကိုယ်တိုင်ဖြစ်စေရန်၊ မိမိကိုယ့်ကိုယ် ကိုယ် ဦးစွာပထမအရည်အသွေးဖြည့် ဆည်းပျိုးထောင်နေရမည်။
(ဆရာအောင်သင်းကတော့ ကိုယ် ကျင့်နှင့်ပညာဟု ဆိုခဲ့ပါ၏)
(၄) ဘဝအဆင့်ဆင့်မြင့်သည်ထက်မြင့်အောင် အောက်ပါ ကောင်းမှုအပြုအမူ၊ အလေ့ အကျင့်များကို အားပေးပျိုးထောင်-
(က) ဒါနကထာ -လှူဒါန်းပေးဝေ
(ခ) သီလကထာ-ကိုယ်ကျင့်ဖြူစင် (ဥပမာ-ဒေါသ ၏ အပြစ်ကို မြင် အောင် ကြည့်။ မေတ္တာ၏ အကျိုး ကိုသိအောင်ကျင့်)
(ဂ) သက္ကကထာ-ကောင်းသော တန်ဖိုး
ရေးစရာ ပြောစရာအားလုံးကို အနှစ် ချုပ်လိုက်ပါက ခေါင်းစဉ် သုံးခုသာရှိပါ လိမ့်မည်-
(၁) မကောင်းမှုများ၊ ရှောင်ရှားပယ်ခွာ၊
(၂) ကောင်းမှုအပေါင်း၊ စုဆောင်း ကြပါ။
(၃) မိမိစိတ်ရင်း၊ သန့်ရှင်းစေရာ၊
(၄) ဤသုံးပါး၊ ဘုရားသာသနာ။